आइसोलेसनबाट महामन्त्री डा. कोइरालाले चिन्ता नलिन आग्रह - समय-समाचार
आइसोलेसनबाट महामन्त्री डा. कोइरालाले चिन्ता नलिन आग्रह
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १८:१६
काठमाडौं, असाेज १ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको भिडियाे सन्देशबाट बताएका छन्।
चाबहिलमा रहेको ओम अस्पतालमा उपचारत महामन्त्री कोइरालाले भिडियो सन्देशमार्फत पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग शुभचिन्तकहरुलाई चिन्तित नहुन पनि भिडियोमार्फत आग्रह गरेका छन्।
उनले आफू अझै २/ ३ दिन अस्पताल बस्ने पनि बताएका छन्। ‘म कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको व्यक्ति आज ओम नर्सिङ होममा आइसोलेसनमा छु। तपाईंहरुले चिन्ता गर्नुपर्दैन। दुई तीन दिन अझै यहाँ बसेर म डिस्चार्ज हुन्छु । यति नै भनौं भनेर’ उनले भने।
कोइरालाको फोक्सोमा निमोनियाको संक्रमण देखा परेको छ। डाक्टर कोइरालालाई क्लिनिकल ट्रायल अर्थात परिक्षणको रुपमा रहेको औषधि रेमडेसिभिर समेत चलाइएको छ।